Xasan Sh: Aqoonsiga maslaxad ayaa ku jirta - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Xasan Sh: Aqoonsiga maslaxad ayaa ku jirta
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 31 Janaayo, 2013, 22:07 GMT 01:07 SGA
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, oo Brussels kula kulmay madaxda Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in kulankii dhexmaray uu jawi wanaagsan ku dhammaaday. Waxa kale uu ka hadlayaa hadalkii Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Siilaanyo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya Brussels
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa magaalada magaalada Brussels waxa uu kula kulmay madaxda Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in si wanaagsan loogu soo dhaweeyay xarunta Midowga Yurub.
Waxa uu sheegay in la dejinayo qorshooyin badan oo la xiriira tobanka sano ee soo socota Soomaaliya waxa ay u baahan tahay.
Madaxweynuhu waxa kale oo uu ka hadlay hadalkii Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo uu sheegay in aqoonsiga dowladda Soomaaliya ay heshay ay tahay mid maslaxad ugu jirto dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Golaha Yurub Herman Van Rompuy Baroness Catherine Ashton, waxa ay sheegtay in ay wax wanaagsan tahay waaga cusub ee Soomaaliya u bilowday. Waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay in xiriirka u dhexeeya Midowga Yurub iyo Soomaaliya uu gacan ka geystay aasaaska horumarka Soomaaliya.